Kaftan | KONGOLISOLO
Soo ogow daawo gaar ah oo loogu talagalay daaweynta haweenka ay takhasuslayaasha hadda suuqa ka bilaabeen; ayaa sheegay in dawada kaliya loogu tala galay dadka waaweyn; walwal badan oo haweenka ah
Posted By: KongoLisolowaa: July 13, 2020 11: 05 No Comments
Magaca badeecada: "Nin". Tilmaam: Ragga waxaa lagula taliyaa dumarka oo dhan. Dadku waa mid wax ku ool ah xaaladaha soo socda "ee niyad jab, walaac, ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 21, 2020 00: 00 No Comments
Waa arrin ka soo horjeedda digaagga. Markii aysan wali bilaabin inay ka faaiideysato bacrinta rooster, waxay heshaa miisaan yar, laakiin markii ...	Akhri wax dheeraad ah